Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish Dani Ceballos Childhood Akụkọ gbakwunyere Ezigbo Ihe Ndị E Dere Ndụ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius nke onye aha ya bụ "Dani“. Anyị Dani Ceballos Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Dani Ceballos Childhood Akụkọ - Nyocha ruo ụbọchị. Ebe E Si Nweta ka AsEnglish, Arsenal na IG
Nchịkọta anyị na-emetụta ndụ ya mbụ, nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ na ịzụlite ọrụ ya, ndụ nwata, ụzọ gaa akụkọ ama ama, ibilite na ama ama, mmekọrịta na ndụ onwe ya wdg.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike okike etiti ya, nke rụpụtarala ya otuto site n'aka ndị na - akwado Arsenal. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Dani Ceballos 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Ndụ mbido
Na-amalite, aha ya zuru ezu bụ Daniel Ceballos Fernández. Dani Ceballos dịka a na-akpọkarị ya mụrụ na 7th August 1996 nye nne ya, Salomé Fernández na nna, Antonio Ceballos na Obodo Obodo nke Utrera. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna ya mara mma.
Ndị nne na nna Dani Cabellos
Ezinụlọ Dani Cabellos sitere na Sevilla, isi obodo Southern Spain. Ha na-esi n'obodo nta Utrera nke a na-ewere dị ka ehi nke ọgụ ọgụ. Ị maara?… Utrera bu obodo ndi oge ikpe Jose Antonio Reyes onye e gburu na June 1st 2019 mgbe Mercedes Brabus S550V kwụsịrị n'okporo ụzọ A-376 dị nso na Utrera.
Dani Ceballos Mụrụ ezinụlọ. Ebe E Si Nweta na DepositPhotos na Espanafascinante.
Dani Ceballos toro n'akụkụ nwanne ya nwanyị Salome Ceballos. Amuru ya dika umu mbu na umu nwoke nye nne na nna ya. N'adịghị ka onye Spain ibe ya Gerard Deulofeu, Dani dị nwayọọ ma chịkọta onwe ya mgbe ọ bụ obere nwa. N'okpuru ebe a bụ foto ya nke nwere nwata mara mma.
Dani Ceballos- Ito eto ụbọchị
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Nkụzi na ịrụ ọrụ
Na-abịa site na obodo hụrụ n’anya na-egwu bọọlụ ma nwee Late Jose Antonio Reyes dị ka arụsị ya, ọ bụ ihe okike maka Dani Ceballos ịhụ n'anya n'egwuregwu ahụ mara mma.
Dani Ceballos, mgbe ọ dị afọ nke 7 jikọrọ oge 2003-04 mgbe oge mbubreyo. Reyes bụ akụkụ nke Arsenal FC nke Invincibles n'akụkụ nke gafere n'oge ahụ na - enweghị mmeri na mmeri Premier League.
Egwuregwu Arsenal Invincibles - Egwuregwu 49
Nnukwu egwu a hụrụ Dani Ceballos na-amasị ya ka ọ bụrụ onye na-agba ụkwụ. Na mbu, o bidoro nke ya escagba bọọlụ gbalaga n'ụlọ ezinaụlọ ya mana emesịrị gara n'ihu gwuo egwuregwu na Utrera.
Oge egbughi oge tupu Dani amara onyinye nke ịme ụdị ihe niile dị iche iche na bọl bọọlụ na-akpali ya ịga na klọb ndị Spain kachasị elu. Mgbe ọ nwetara ọkpụkpọ oku ịga ule na Villọ akwụkwọ Sevilla, ọ theụ nke onye ọ bụla n’ezinụlọ ya gosipụtara enweghị oke.
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Ndụ Ndụ Mmalite
Dani weghaara ule nke ulo akwukwo Sevilla na agba di iche-iche, etinyere ya na ulo akwukwo mgbe o di 8 n’oge 2004-2005, oge obula mgbe Arsenal nwesiri ihe ngosi ha. Dịka ọ dị ọtụtụ ụmụaka, ọ bụ ihe obi ụtọ isonyere ndị otu Sevilla FC bụ ndị ntorobịa ọbụna gị tochụ ọtụtụ ihe dị ka ememe ụbọchị ọmụmụ na-efu efu ma ọ bụ ihe ọ na-ele anya n'ụlọ ezinụlọ ya.
Little Dani sere n'okpuru ebe a nwere mmetuta mmalite ya na klọb ahụ ebe ọ na-enyere ndị otu egwuregwu ibe ya aka inweta mmeri mbụ ya.
Dani Ceballos- Ndụ Ndụ Nlekọta mbụ. Ekele diri IG
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Akpanwu akwukwo akuko
Na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ, obere Dani nwere mkpebi siri ike ime ka nrọ ya mezuo ma a hụghị ebumnuche ya iru ndị otu klọb dịka ihe na-agafe agafe.
nsogbu biararuo n'isi ọrụ ya. OBIARA Dani Ceballos weputara na 2009 site na ulo akwukwo Sevilla n'ihi nke a nsogbu ụbụrụ na-adịghị ala ala.
Dani Ceballos Okporo tozọ Akụkọ Mere Eme
IHE: Dabere na nchọta Google, ọria na-egbu egbu bụ otu ụdị nke COPD (ọrịa mgbochi mkpọnwụ na-adịghị ala ala). Na Dani Ceballos, o nwere akpukpo aru ma aru ma aru site na obi ya nke na-eme otutu imi. Ọnọdụ a mere ka Dani Ceballos nwee ụkwara na ike iku ume n'ihi ya na-eme ka agụmakwụkwọ ya ruo na njedebe nke ọrụ ya na ha.
Nwa obula biela ụdị ọrịa a n’oge ọrụ ha ga-amata na oke obi mgbawa ọ nwere ike ibute. Ndị mụrụ Dani nyeere nwa ha nwoke aka ijikwa ọnọdụ ahụ ike ya. Ha kwere ka ọ nọrọ n'ụlọ ezinụlọ ha nke mbụ mere ka ọ banye ezumike ọrụ ya, wee hapụ ya ka ọ gaa n'ihu na-egwu bọọlụ ntorobịa CD Utrera mgbe ọ na-anata ọgwụgwọ.
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Na-ewu ewu Akụkọ
Ka afọ ole na ole gafere kpọmkwem na afọ 2011, Dani Ceballos gbagoro. O kpebiri ịga n'ihu na mmepe ntorobịa ya na Real Betis mgbe ya na ha sonyere na 2011.
Dani ka nwere mkpebi siri ike iji mee ka nrọ mbụ ya mezuo. Ị maara?… Mgbe ọ rụchara ọrụ dị iche iche na agụmakwụkwọ, Dani banyere nkwekọrịta ọkachamara na Real Betis na 22 February 2014 n'agbanyeghị na ọ ka dị obere. Isi ihe pụtara ìhè na klọb ahụ na-enyere ndị otu ya aka ka ha merie Segunda División La Liga 2 trofi.
Dani Ceballos na-ejide Real Betis Trophy ya na nturu ugo
Naanị mgbe otu mmeri ahụ meriri, ọ gbagotere Dani ka ọ bụrụ onye egwuregwu ịgba egwu Spanish. Ọ ghọrọ onye isi Real Madrid na-ahụ n'anya na-arịọ arịrịọ maka mbinye aka ya. Kpamkpam on 14 July 2017, Real Madrid kwupụtara mbinye aka nke Ceballos na nkwekọrịta afọ isii.
Na mbido, ihe niile gara nke ọma na klọb. Mana oge siri ike nke ọrụ ya bịara mgbe Zidane kpebiri ịgbahapụ ya maka Modric na Kroos. Oge kacha ewe iwe ka Dani bịara Zidane eji ya eme ihe ekwenyeghile 28 sekọnd nke egwuregwu megide Leganes, ihe mere Dani dara ogbenye (esere n'okpuru) hụrụ mkpa ọ dị ịchọta ebe ọzọ ga-egwu egwuregwu ya.
Dani Ceballos hapụrụ ọgba ahụ mgbe ejiri ya sekọnd 28 na egwuregwu
Ichoro nna Late Jose Antonio Reyes: Dịka ekwuru, oge nyocha siri ike maka Dani Ceballos banyere ọdịnihu ya na klọb ahụ. O kpughere otu oge na ọ gwara nna okwu mbubreyo Jose Antonio Reyes n’okwu ya n’okpuru;
Agwara m nna ya okwu tupu m abịarute Arsenal na ọ gwara m ka m ghara iche ugboro abụọ n'ihi na Arsenal bụ ọgbakọ mara mma, na-ekwusi ike na nwa ya nwoke nwụrụ anwụ José nwere ọmarịcha ebe a. '
Lee na 25 July 2019, ekwuputara na Dani Ceballos esonyere Arsenal na mgbazinye oge mgbazinye ego ma na-enye ya nọmba ahụ asatọ nke mbụ ha hapụrụ Aaron Ramsey.
Dani Ceballos sonyere Arsenal. Ebe e si nweta ya Independent
Oge mmetụta uche bịara Dani Ceballos mgbe ọ hụrụ foto nke mbubreyo Jose Antonio Reyes oge ọ bụla ọ gara ọzụzụ ọzụzụ. Nke a mere ka o nwee olile anya inyere klọb aka ịmaliteghachi ọ gloụ nke ubi ha.
Ị maara?… Ihe mbido Dani maka Arsenal kwụsịrị na ọ nyere enyemaka abụọ na mmeri nke Match Match.
Dani Ceballos meriri nwoke nke egwuregwu bọọlụ na egwuregwu mbụ ya na klọb. Ebe e si nweta ya Eke
Ndị otu bọọlụ Arsenal kwuru na ụdị ọkpụkpọ ya na egwuregwu mbụ ya gbakwụnyere ịdị mma nke Rolls Royce na injin nke Mustang. Dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ, a na-ahụ Dani Ceballos dị ka otu n'ime usoro mmepụta na-enweghị njedebe nke ndị na-agba bọọlụ dị ịtụnanya bụ ndị bịara igwu egwu na klọb North London. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Ndụ mmekọrịta
Ị maara?… Ndị egwu bọọlụ Arsenal cheere oge iji nabata Dani Ceballos n'ọgba egwuregwu. ỌMA dịkwa mkpa ịnabata enyi nwanyị nwanyị Ce Celoslos Maria Sanchez Del Moral n'obodo mara mma nke London.
Maria Sanchez Del Moral eserese n'okpuru bụ 24 dị afọ n’oge ederede. Afọ a site na ntinye pụtara na ọ dị afọ karịa enyi ya nwoke. Onye chọrọ ịma!!… Afọ dịka ha kwuru bụ naanị ọnụọgụ.
Zute Maria Sanchez Del Moral- Thehụnanya Dani Ceballos Ndụ. Ekele diri IG
Maria si Seville, otu obodo ha na nwoke ya. WAG dị ịtụnanya na-arụ ọrụ dị ka onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ ụlọ akwụkwọ ọta akara laa azụ na Madrid tupu esonye enyi ya nwoke na London. Dabere na TheSun, Nkuzi di n’ezie n’ezi ezin’ulo ya dika nne ya kuzikwara ya mgbe o no ulo akwukwo. Iji kpatachaa ego ọ na-enweta dị ka onye nkuzi, Del Moral arụọla ụfọdụ ụdị dị ka ọrụ nwa oge.
Ha abụọ hụrụ nnụnụ n'anya Dani Ceballos na enyi ya nwanyị Maria malitere ịlụ kemgbe 2016, afọ ahụ ọ malitere ndụ ọrụ agadi ya maka Real Betis. Mmekọrịta ha na-enweghị ihe nkiri hụrụ Dani Ceballos na-amalite dị ka ezigbo ndị enyi Maria tupu ihe ahụ gbanwee ghọọ ezi ịhụnanya.
Dani Ceballos na Maria Sanchez Del Moral. Ekele diri IG
Dani ji ụmụazụ ya ihe karịrị nde 1.6 na Instagram ya foto ya na enyi nwanyị ya. Ọ otu mgbe kerisiri omarịcha foto na ibe ya Instagram ebe ọ pụtara na ọ na - adị jụụ nwayọ na enyi ya nwanyị.
Ceballosl hụrụ n'anya ka ya na enyi ya nwanyị nwee oge dị mma
Na-ekpe ikpe site n'ụzọ abụọ ndị hụrụ ha n'anya na-aga dị ka a hụrụ n'okpuru, ọ bụ naanị oge tupu ha abụọ ekpebie iwere nzọụkwụ mbụ na-eduga n'alụmdi na nwunye ha.
Dani Ceballos- Ihapụ ikwe ka uche ya mee Okwu. Ekele diri IG
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Ndụ nke Onye
Tomata Dani Ceballos nkọwa gbasara ndụ gị na mpụga egwuregwu ahụ ga - enyere gị aka inweta nkọwa zuru ezu banyere ya. Anyị na-amalite site na ajụjụ a na-ekwu; Kedu ihe na-eme Dani Ceballos tiketi?
Kedu ihe na-eme Dani Ceballos Tick. Ekele diri IG
N'egwuregwu bọọlụ, Dani Ceballos dị egwu, okike, ntụkwasị obi nke onwe ya, onye kachasị ike ma sie ike iguzogide. Ọ gosipụtawo na ọ bụ onye nwere ike imezu ihe ọ bụla ọ chọrọ ime n'akụkụ ọ bụla nke ndụ ha na-enye. A na-ahụ ihe atụ n’ụzọ ya wee ruo na akụkọ ama ama.
Na-ekpe ikpe site na enyemaka ndị ọ na-enye n'egwuregwu ahụ, Dani bụ onye nwere ike nke idu ndị mmadụ na ebumnuche metụtara-ihe. mmeri. N'ikpeazụ, ọ nwere ahụike na-eme ihe ọchị nke na-eme ka mmekorita ya na ndị ọzọ dị mfe.
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Ndụ Ezinụlọ
Dani Ceballos nwere nnukwu ezinụlọ bụ ndị Sevillians site na mbido. O ji agbụrụ ọmụmụ ya na mgbọrọgwụ ya mma ma n’oge ọjọọ. Ndi ezinulo niile; nne ya, nna ya, nwanne ya nwoke, nwanne ya nwanyị, nwanne nna ya, nwanne nna ya, nwanne nwanyị nwanne na abali a dị n'okpuru ebe a dị njikere ime ihe ọ bụla iji chebe ndị ha hụrụ n'anya.
Dani Ceballos na ndị otu ezinụlọ na-eme ememe ncheta ọmụmụ ya. Ekele diri IG
N’ikpe ikpe site n'okporo ụzọ siri ike ya na akụkọ ọdịnala, ị ga-ahụ na ndị ezinaụlọ Dani Ceballos, ọkachasị na ndị mụrụ ya guzo n'akụkụ ya n'oge ọ tara ahụhụ site na (COPD) Ọrịa Ọrịa Na-adịghị Ala Ala. Amabeghị ihe banyere ọrụ nna ya, mana otu ihe anyị ji n’aka bụ na ha so n’etiti ndị kacha nwee ọfụma. Ugbu a, ka anyị mee ka ị mata nwanne nwanyị Dani Ceballos, onye bụ akara ya 1.
Banyere Dani Ceballos Nwanna Nwaanyị: Zute Samole, nwanne nwanyị Dani Ceballos onye nwere nne ya.
Zute Salome Ceballos- Dani Ceballos nwanne. Ebe e si nweta ya Elespanol
Samole Ceballos bụ onye na-arụsi ọrụ ike na netwọk mmekọrịta yana ọ bụkwa onye na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi nke nwanne ya nwoke Dani. Dị nnọọ ka nne na nna ha, ọ laa azụ n'oge ndị na-adịbeghị anya iji gbachitere ya megide nkatọ nke ndị Fans gosipụtara ya maka ịhapụ Real Betis maka Madrid. Otu oge, ozi Salomé na-agọnarị nkatọ megide nwanne ya nwoke bụ nke a buru ụzọ kpebie. O kwuru otu oge;
"Nwanna, ị bụ onye atụ nke ịchụ aja na imeri, ị nwere ya. Are bụ onye mmeri. Lụọ ọgụ, ị na-eti mkpu, ị na-agba ọsọ ... YOU na-eji mmachi ọchị eme ya niile. Aga m akwado bọọlụ gị oge niile, na-agwa gị na ị nwere anwansi, na ị dị iche na ndị ọzọ. ”
Thebụ onye kachasị egwu Dani abụghị naanị ọrụ ụbọchị ya. Salome sere n'okpuru ebe a na nwanne ya nwoke bụkwa onye na-ama mma nke ji onwe ya na-eme ndị ọzọ ihe.
Dani Ceballos na nwanne ya nwanyị- Salome Ceballos. O bu onye mara mma n’obi na ndi oru. Ebe e si nweta ya Elespanol
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye si ebi ndụ
Ikpebi n'etiti ịdị na-eme ihe na nanị inwe obi ụtọ abụghị ugbu a nhọrọ siri ike maka Dani Ceballos. Dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ, a na-eji ego buru ibu na nde nde pound maka aha ya n'ihi ọrụ ndị ọ họọrọ dị ka onye na-agba bọl.
Dani Ceballos, dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ ugbu a Ọ B NOTGH living ibi ụdị ndụ dị mfe site na ọtụtụ ụgbọala mara mma dị ka a hụrụ n'okpuru.
Dani Ceballos LifeStyle Eziokwu
Dani Ceballos site n'ihe yiri ka ọ naghị enwe nnukwu nsogbu ijikwa ego bọọlụ ya na ịchekwa ụfọdụ maka ụbọchị mmiri.
Dani Ceballos Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Ntanye Eziokwu efu
Ị maara?… Ọ ghọrọ mpempe akụkọ ọjọọ maka Mesut Ozil mgbe onye ntorobịa Real Madrid sonyeere Arsenal na mbinye ego.
Mesut Ozil tụrụ ụjọ maka mbata Dani Ceballos. Ebe e si nweta ya Gwa na YouTube
A na-ezighi ezi ihe mgbaàmà ọjọọ ahụ n'ihi Ozil abụrụla nke a na-akọkarị banyere ọdịnihu ya na Arsenal. Agbanyela ya ịhapụ Arsenal ọtụtụ oge mgbe oge 2018 / 2019 na-akụda mmụọ na ugwu London. Ihe kachasị mkpa bụ ka ụlọ ọgbakọ choro iwepu ụgwọ ọrụ ya dịka onye ọkpụkpọ ego kachasị akwụ ụgwọ yana £ 350,000-kwa izu.
Ị maara?… Ọtụtụ ndị egwu bọọlụ Arsenal amaghị na Dani Ceballos nwere ọnụọgụgụ dị mma nke mmadụ na ọgbakọ sọpụrụ aha ya. N'okpuru ebe a bụ mmịpụta site na ibe Wikipedia ya dịka n'oge ede.
Dani Ceballos Untold Nkwanye ugwu na onyinye. Ebe E Si Nweta Wikipedia.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ nwata anyị nke Ce Celoslos gbakwunyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Bọchị agbanweela: Septemba 16, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 13, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 3, 2020
Bọchị agbanweela: Septemba 15, 2020